Cala Macarella, rimwe remakungwa akanaka kwazvo muMenorca | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | Minorca, Beaches
Cala Macarella ndeimwe yemahombekombe akanaka kwazvo mu Menorca chitsuwa. Inowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, padyo padyo neguta rakanaka re Citadel, guta rekare rechitsuwa, gore rega rega rinogashira zviuru zvevashanyi vanoda kutorwa mifananidzo pachiri.
Sokunge iko kukwezva kweichi chidiki chefu chakarongedzwa nemadziro ematombo uye anenge mhandara anga asina kukwana, padhuze payo une Cala Macarelleta, kunyange madiki madiki uye akakosha pakuita nudism. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Cala Macarella, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Chii chakaita Cala Macarella?
1.1 Mapako ari pasi pemvura
2 Ungasvika sei kuCala Macarella
3 Izvo zvakapoteredzwa neCala Macarella
Chii chakaita Cala Macarella?
Chinhu chekutanga chatinofanira kunongedzera kwauri maererano neCala Macarella ndechekuti ine yakasviba chaiyo. Jecha rayo jena uye mvura yeruvara rwebhuruu zvinokufadza. Ino zvakare inzvimbo yakavanda inodzivirirwa ne makomo madiki edombo rakasimba, sezvatakakuudza, umo mavakaumbwa mapako iyo, kubvira panguva dzekare, yanga ichishandiswa senzvimbo yekuvanda yekushandisa kupera kwevhiki.
Muchikamu chayo chepamberi, une mashizha Pine musango iyo inosvika kumahombekombe pachayo uye inonakidza nzvimbo ye mirwi. Kunyangwe iri nzvimbo iri kure, muzhizha gungwa rakazara. Kune vashoma vafambi kuenda kuchitsuwa cheMenorca vasingashanyi. Wese munhu anoda, zvirinani, kuti asvike kwaari kuti atorwe mifananidzo munzvimbo yakanaka kudaro.
Uye zvakare, ine rakakura rakakura bhawa bhawa kwaunogona kudya usati wadzokera kumahombekombe. Kune izvi zvese, pamwe zvingave zvirinani kana iwe ukaenda kuCala Macarella in primavera oa kutanga kwekuwa kuti unakirwe nerunyararo.
Mapako ari pasi pemvura
Iyi yakanaka Cove zvakare ine akati wandei anoyevedza epasi pemvura mapako aunogona kushanyira paunenge uchidzidzira iyo snorkel. Kuti uzviwane, unofanirwa kushambira uchibuda munzvimbo ine jecha padyo nedombo kuruboshwe. Panenge zana zana nemakumi mashanu emamita, iwe uchawana idzi matanda. Ivo chibereko chechisikigo karst yedombo rinoumba madziro emumativi ayo anomisikidza mahombekombe uye zvakare ari pamusoro pegungwa, sezvatakatsanangura kare.
Nekudaro, pasi pegungwa cheCala Macarella haina kunyanya kunakidza. Ivo jecha uye havana kupfuma zvakanyanya mumiti nemhuka. Iwe hautomboona mamwe marudzi ealgae, dzimwe nyeredzi uye masiponji uye, neine rombo rakanaka, tapaculo (hove yakafanana neyavo) yakafukidzwa mujecha pasi.
Ungasvika sei kuCala Macarella
Chimwe chezvinhu zvinokwezva zveiyi diki diki zvine chekuita nenzira yekuenda ikoko. Unogona kuzviita nemugwagwa, asi isu hatisi kutaura nezvazvo, asi nezve yakanaka nzira yekukwira nzira: iyo Camí de Cavalls.
Iyo nzira yakatenderedza chitsuwa chese cheMenorca inozivikanwa nezita iri kubvira kuMiddle Ages, panguva yamambo Jaime II Akazivisa mutemo waisungira vaMenorcans kuti vave nebhiza rekudzivirira chitsuwa ichi pakurwisa kwevapambi.
Parizvino, ino yakanaka nzira, iyo inokupa iwe nharaunda dzakanaka, inogadziriswa uye yakakamurwa mumatanho. Mumwe wavo, uyo unobatanidza makoiwa Turqueta neGaldana, Anopfuura neCala Macarella. Mushure meawa yekufamba musango nemumasango zvinokupa maonero anonakidza, iwe unosvika kuMacarella. Kumberi, kana iwe ukatendeuka kurudyi, unogona zvakare kushanyira Cala Macarelleta.
Camí de Cavalls padyo neCala Macarella
Kune rimwe divi, sezvo iwe wakatora iyo Camí de Cavalls uye kana ukazviwana uine simba, unogona kuitevera Cala Galdana, chimwe chishamiso cheMenorcan zvakasikwa, ichipfuura nepakati peapo maonero anokupa iwe zvisingaenzanisike nzvimbo.
Nekudaro, sezvatakataura, iwe unogona zvakare kusvika kuMacarella na mugwagwa. Kune mabhazi anoenda kumahombekombe aya kubva Citadel. Asi, kana uchida kuzviita mumotokari yako, unofanira kutora mugwagwa unoenda mahombekombe ekumaodzanyemba, munzira yeku Mutsvene Johane weMisa. Mushure mekutsaukira ku Cala TurquetaIwe uchasvika paki yemotokari, iyo inobhadharwa uye ingangoite maminetsi gumi neshanu kubva kuMacarella.
Izvo zvakapoteredzwa neCala Macarella
Mukwanisi wakakwana wekushanya kwako kugungwa iri ndiro guta re Citadel, pasina mubvunzo nhoroondo yenhoroondo muMenorca. Kwete pasina, yaive guta rayo kusvika 1714, apo maChirungu vakaitora. Zvino guta guru ndere Mahon, asi zviyeuchidzo zvikuru zviri muCiudadela.
Zvichida chinhu chakanyanya kunaka mutaundi racho ndeiro guta rekare, Yakaumbwa nemigwagwa yakatetepa ine mazita akasarudzika (semuenzaniso, «Que no pasa») uye iyo inosangana pane iyo kereke ye santa maria. Ichi chivakwa chakanakisa cheCatalan Gothic chakavakwa muzana ramakore regumi nematatu umo Chaperi yeMweya, Yakagadzirwa muXVIII ichitevera macanon eBaroque.
Munhoroondo yenhoroondo yeCiudadela iwe une mamwe mapoinzi ekufarira. Semuenzaniso, iyo Akazvarwa square, kwaunozoona iro obelisk rinoyeuchidza kukunda kwakanangana nengarava dzeTurkey dzakarairwa naAdmiral Pialí muna 1558. Unogona zvakare kushanyira musangano weSan Agustín, kubva muzana ramakore regumi nemanomwe uye mukati mauri iwe uchawana inonakidza diocesan miziyamu. Izvi, pamusoro pekunamata goridhe, zvine zvidimbu zvemadzitateguru talayotic tsika, Yakagadzirwa mu Balearic zviwi muNguva dzeBronze neIron.
Imwe pfungwa inokwezva yeCiudadela ndiyo iyo harbour, kwaunogona kuona chinoshamisa chiitiko che rissaga. Pasi pemamwe mamiriro ekunze, gungwa rinokwira nekudonha kusvika parazara. Iwe unozofadzwa kuona mafambiro anoita ngarava panguva yekuda kwekuparadza kwegungwa.
Iyo yekufambisa inokutora iwe kuenda ku nhare yeSan Nicolás, yakavakwa muzana ramakore gumi nemasere kudzivirira guta kubva pakurwiswa nevavengi. Uye zvimwe zvivakwa zvinonakidza zveCiudadela sol el Imba yeTorresaura, iyo inopindura iyo Levantine Gothic uye iyo Town Hall, yakavakirwa panhare yekare.
Kune rimwe divi, pamugwagwa unobva kuCiudadela uchienda kuMahon, iwe unowana ichi chivakwa chemariro chiri chaicho Talayotic tsika zvatataura nezvazvo. Inoshaya dombo muchikamu chayo chepamusoro. Uye, kana tichifanira kuteerera ngano, izvi zvine tsananguro yekuda kuziva.
Hofori mbiri dzaikwikwidzana nekuda kwemusikana. Kufunga kuti ndeupi wavo akakodzera kumuroora, mumwe akavimbisa kuchera kusvikira awana mvura, nepo mumwe aizovaka ngarava yematombo. Pakazotora wekupedzisira kupedzisa kuvaka kwayo, akanzwa kupururudza kweumwe kuti awana mvura. Zvino, wekutanga, akakundwa uye akatsamwa, akakanda dombo raienda kugomba, achiuraya waaikwikwidza naye. Akatya nazvo, akatiza uye hapana kana mumwe wavo akaroora musikana.
Mukupedzisa, Cala Macarella Ndiyo imwe yemahombekombe akanaka kwazvo mukati Minorca zvese zviri zviviri zvejecha rayo jena uye mvura yeruvara rwebhuruu uye nenzvimbo dzayo inokatyamadza. Enda kumberi uishanyire. Iwe hauzodemba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Minorca » Cala Macarella